October 5, 2020 - Myan News
နွေဈေးကွက် Deadline နေ့အတွက် လီဗာပူးနဲ့ သက်ဆိုင်သော အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စများ
ဒီကနေ့ဟာ အင်္ဂလန် အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက် Deadline နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုနဲ့ ရောင်းချမှုတွေကို ဒီနေ့မှာ နောက်ဆုံးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တွေကို အငှားချတဲ့ ကိစ္စကတော့ နောက်ရက်တွေမှာ ဆက်လက် လုပ်ခွင့် ရှိပါဦးမယ်) စီးရီးအေကလပ် နှစ်သင်းက ကမ်းလှမ်းမှု လုပ်ထားတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ရှာကွီရီအတွက် နောက်ကျ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ထပ်ရှိလာဖို့ မမြင်ဘဲ ဆွစ်ဇလန်သားဟာ ဇန်နဝါရီအထိ လီဗာပူးမှာပဲ ဆက်နေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အငှား ကမ်းလှမ်းမှုတွေဖြစ်ကာ လီဗာပူးက လက်မခံခဲ့ဘဲ… Continue Reading →
ကလော့ပ်နဲ့ ၁၇ နှစ်ကြာ ပက်သက်မှု ရပ်ဆဲခဲ့သူ ဘူဗက်က လီဗာပူးမှာ သူတာဝန်ယူခဲ့မှုကို ဖွင့်ချ
လီဗာပူးအသင်း မန်နေဂျာ ယာဂင်ကလော့ပ်ရဲ့ ၁၇ နှစ်ကြာ တွဲဘက်ဟောင်းကြီး ဘူဗက်က အသင်းဟောင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို The Athletic ကနေ ဖွင့်ထုတ်မှု လုပ်ပေးသွားပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာ ‘ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စ’ လို့ အကြောင်းပြကာ အမည်မသိ ကိစ္စကြောင့် လီဗာပူးကနေ ထွက်သွားတဲ့ ဘော့စနီယန်း-ဆာဘ် လူမျိုး ဘူဗက်ဟာ တစ်ချိန်ကတော့ ယာဂင်ကလော့ပ်ရဲ့ ဦးနှောက်လို့ နာမည်ကျော်သူပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ လီဗာပူးအသင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားတွေ အနိုင်ရချိန်မှာတော့ သူ အသင်းမှာ ရှိမနေတော့ပါဘူး။… Continue Reading →
လီဗာပူးအတွက် တစ်ခုတည်းနဲ့ အရေးတကာ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စကို ကလော့ပ် သတိပေး
မန်နေဂျာယာဂင်ကလော့ပ်က အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ပွဲဟာ ဖြစ်ကို မဖြစ်သင့်တဲ့ အရံှူးရလဒ်အဖြစ် ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ပ်ကတော့ ရလဒ်က မပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်သလို အသင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဒီအခြေအနေကနေ ရုန်းထဖို့နဲ့ အကောင်းဆုံး တုန့်ပြန်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ လီဗာပူးရဲ့ အနေအထားဟာ ဦးကျိုးသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး ဒီရလဒ်ကို ပြန်အဖတ်မဆယ်နိုင်ရင် အသင်းဟာ ထိခိုက်မှုကြီးမယ်ဆိုတာကို ယာဂင် နားလည်တယ်။ ယာဂင်ကလော့ပ်က ” ငါ ဘာပြောပြော ရလဒ် ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အခုချိန်မှာ ဘာလုပ်သင့်လဲ? အရမ်းကို နာကြည်းရတာလား? အဲ့လိုပဲ… Continue Reading →
ဗီလာကို အရှက်တကွဲအရှုံးအတွက် သူအပါအဝင် အသင်းသားတိုင်း တာဝန်ယူရမယ်လို့ ဗန်ဒိုက်ပြော
လီဗာပူးအသင်းဟာ မနက်က ယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့ အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ၇-၂ ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား အရေးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ဒီပွဲမှာ ဗီလာဟာ အသိအမှတ်ပြုရမယ့် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သလို လီဗာပူးအသင်းကလည်း ရာနှုန်းပြည့် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့အတူ ဒီလောက် ဂိုးပြတ် အရေးနိမ့်ခဲ့တာအတွက် အသင်းက လူတိုင်းက တာဝန်ယူရပါမယ်လို့ ဗန်ဒိုက်က ပြောပါတယ်။ ဗန်ဒိုက်က ” ပထမဆုံးအနေနဲ့ အက်စတွန်ဗီလာရဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်မှုကို ချီးကျူးပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ကိုယ်ဘာသာ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ပွဲအစကနေ… Continue Reading →
လေ့ကျင့်ရေးမှာ ထိခိုက်မှုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အယ်လီဆန်ရဲ့ ပုခုံးဒဏ်ရာ အခြေအနေ
လီဗာပူးအသင်း အဓိက ဂိုးသမား အယ်လီဆန်ဟာ စနေနေ့တုန်းက အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးမှာ ဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့် အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အယ်လီဆန်ဟာ ပုခုံးမှာ ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ သူ့ဒဏ်ရာက မျှော်လင့်ထားတာထက် ပြင်းထန်ခဲ့တယ်။ အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ပွဲကို လွဲထားပေမယ့် တကယ်တမ်း စိတ်ပူရမှာက ဘယ်လောက် ကြာဦးမလားဆိုတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ကလော့်ကတော့ ” အယ်လီဆန်က အဲဗာတန်ကို ရင်ဆိုင်ရမယ့် ပွဲမှာလည်း ပါနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအခြေအနေမှာ ဘယ်လောက်ထိ ကြာဦးမလဲဆိုတာကိုလည်း သေချာ မသိပါဘူး။ ဒီဒဏ်ရာက… Continue Reading →
ဂိုးပြတ် အရှက်တကွဲ ရှုံးပွဲမှ တစ်ခုတည်းသော သတင်းကောင်းကို ကလော့ပ် ထုတ်ဖော် ပြောဆို
လီဗာပူးနည်းပြ ယာဂင်ကလော့ပ်က အက်စတွန်ဗီလာ ကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ၇ ဂိုး ၂ဂိုးနဲ့ အပြတ်အသတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ရလဒ်အပေါ် ရှက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဟန် မပြဘဲ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ကာ ထိုပွဲကနေ တစ်ခုတည်းသော အကောင်းမြင်စရာ ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဗီလာနဲ့ ပွဲမှာ လီဗာပူးအသင်းသား တစ်ဦးမှ ဒဏ်ရာ မရခဲ့ဘဲ အကောင်းပကတိ ပွဲပြီးခဲ့တာကို ကလော့ပ်က ရည်ညွှန်းခဲ့တာပါ။ ပွဲထွက် ဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန် ဒဏ်ရာကြောင့် မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘဲ သီတင်းပတ် ၆ ပတ်လောက်ထိ… Continue Reading →